Ukuhamba Okuyisikhombisa Okuhle Kildare - IntoKildare
Imindeni, Couples, Kusabelomali, Amagugu Afihliwe, Abathandi Bangaphandle, Izinto Ozozenza
Uma ubheka uthuli olusezintanjeni bese uphumela emoyeni omusha kule mpelasonto, kungani ungafaki uphawu oluthile lwalezi zimangaliso zeKildare ezisuka kuhlu lwakho!
Khuphula izinga lokushaya kwenhliziyo ngenkathi uhlola okulungile emnyango wakho! IKildare enhle ineminye imizila emangalisa kakhulu ezweni, enezinsalela zasendulo nezindawo zemivubukulo ezigcwele esifundeni sonke, futhi ngalezi zindawo eziyisikhombisa ngeke ubambeke kweminye imisebenzi yangempelasonto!
Okuthunyelwe okwabiwe nguToni Haberland Photography (@tonihaberlandphotography)
Ukuhamba nje ngemizuzu emihlanu ukusuka eRathangan Village kunendawo enhle nengatholakali ngokwedlulele UKillinthomas Woods. Kugcwaliswe ngama-bluebells entwasahlobo naphansi kwamawolintshi amahlamvu ekwindla, kunezinketho zokuhamba okufishane nokude, konke kuqala nokuphela kukhaphethi.
Kunezimpawu ezikhombisa ukugcwala ezigcwele kuyo yonke imizila, okwenza lolu hambo olungu-10km kube lula ukuzulazula kubavakashi. Abahamba ngezinyawo bangajabulela imvelo ehlukahlukene yezinkuni, enezinhlobonhlobo zezitshalo nezilwane.
Okuthunyelwe okwabiwe nguRob Walshe (@the_irish_dogfather)
Thola okungaphandle okukhulu nge-meander ezungeze ama-parkland amahle we Indlu yaseCastletown! Kuvulwe unyaka wonke, ama-parkland aziqhayisa ngemizila emangalisa nokuhamba emfuleni, futhi akhululekile ukungena.
Njengoba icwile emlandweni, leli paki ligcwele inqwaba yezimbali nezilwane zomdabu, ngakho-ke gcina amehlo akho ehlutshiwe ezihlahleni, emifuleni nasemachibini!
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-Emma-Jane Leeson (@emma_jane_leeson)
Kutholakala ngaphezu kwemizuzu engama-30 ngaphandle kweKildare Town kulele i- IDonadea Forest Park. Ngemizila emithathu ehlukene yokuhamba, konke kusuka ku-1km kuya ku-6km, kunokuthile okuzohambisana nayo yonke iminyaka lapha.
Ukuhambahamba ntambama okuncane, landela iLake Walk, ezungeza ichibi eligcwaliswe ngamanzi futhi elingathathi ngaphezu kwesigamu sehora. INature Trail ingaphansi nje kwe-2km, enqamula phakathi kobuciko obumangalisayo befa. Kubantu abahamba kakhulu, i-Aylmer Walk iyindlela engu-6km Slí na Slainte eletha abahambahamba nxazonke zepaki.
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-𝑱𝒂𝒔𝒏𝒂 𝑴𝒂𝒅𝒛𝒂𝒓𝒊𝒄 (@mrsjasnamadzaric)
Jabulela ukuhamba ngempelasonto osebeni lomunye wemifula yomlando wase-Ireland, uMfula iBarrow. Ngokuthile okuthakazelisa ngayo yonke indawo kule ndledlana eneminyaka engama-200 ubudala, lo mfula ungumngane ofanele kunoma ngubani ohamba noma ohamba ngebhayisikili ngasogwini IBarrow Way.
Zizwa izimbali nezilwane ezinamachashazi asogwini lwayo, izingidi ezithandekayo namakhaya amadala okhiye wokugcina.
An umhlahlandlela womsindo itholakala ngokulalelwa okungaphezu kwamahora amabili, kugcwele izindaba nolwazi ngamakhosi asendulo aseLeinster, ishiya likaDeveli, isonto elincane laseSt Laserian nokuningi.
IRoyal Canal Way
Okuthunyelwe okwabiwe nguColletteMichelle (@scorpiocollette)
Umzila ofanayo neBarrow Way, lo mugqa omuhle Hamba ilungele labo abafuna ukuthatha ikhofi bese beqhubeka nokuhamba. Ukuhamba ufike lapho uthanda khona, lapho-ke ungagxumela kalula ezokuthutha zomphakathi ukuze zikubuyisele lapho uqala khona.
Kunezibonelo eziningi ezibalulekile zeminyaka edlule yeshumi nesishiyagalombili yemivubukulo yezimboni ongayithanda endleleni, kufaka phakathi iRyewater Aquaduct ethatha umsele ophakeme ngaphezu komfula iRye, futhi okwathatha iminyaka eyisithupha ukwakhiwa.
Okuthunyelwe okwabiwe nguDaniel Craig (@im_daniel_craig)
Yazisa amahlamvu amahle kuhambo lwangeSonto olunomoya opholile eduze kwe-Athy Slí. Kusukela enkantolo (eyakhiwa ngo-1857) yi-River Barrow, le ndlela engu-2.5km ihamba eceleni komfula, inyuke nge-Barrow Path, idlule iSt Michael's Church of Ireland, ngaphansi kwe-Horse Bridge ne-Railway Bridge, kanye nase Indlela yeCanal.
Lo mzila oyisiyingi ungahanjiswa kunoma iluphi uhlangothi futhi ulungele ukuhamba kubangane abanoboya, ucindezele abahamba ngezinyawo, noma umane uphume imizuzu engama-30 ukujabulela ukukhanya kwelanga langoFebhuwari.
Okuthunyelwe okwabiwe nguRegina (@reginaoftheland)
Ezinze eMpumalanga Yasendulo yase-Ireland yiSt Brigid's Trail, inhliziyo yemvelaphi yobuKrestu e-Ireland.
Indaba ephawulekayo kaSt Brigid, usanta wesifazane othandekayo wase-Ireland, nesikhathi sakhe eKildare kuqokonyiswa kuyo yonke iSt Brigid's Trail njengoba uthatha ezinye zezimpawu ezaziwa kakhulu zaseKildare Town.
The umzila iqala eKildare Heritage Centre eMarket Square lapho izivakashi zingabuka khona isethulo esibukwayo nesilalelwayo eSt Brigid. Lo mzila ube usukuthatha uthathe uhambo oludlula eSt Brigid's Cathedral, eSt Brigid's Church kanye naseSolas Bhríde Center enikezelwe efeni elingokomoya leSt Brigid nokubaluleka kwayo esikhathini sethu. Indawo yokugcina kulolu hambo yi-St Brigid's Well yakudala ku-Tully Road, lapho izivakashi zingahamba khona ngenkathi kunehora elinokuthula.
ImindeniCouplesKusabelomaliAmagugu AfihliweAbathandi BangaphandleIzinto Ozozenza
Imisebenzi Engcono Kakhulu Yentsha eKildare
Izindlela ezi-5 ezihamba phambili zemvelo eKildare
Thola i-Sun Gods, i-Bog Roads kanye ne-Legendary High Kings